Ubuntu inoburitsa chigamba chikuru kugadzirisa dambudziko mu 'Sudo' | Linux Vakapindwa muropa
Canonical yakatanga chirongwa che chimbichimbi chengetedzo chigamba cheSUDO package zvichitevera kuwanikwa kwekusagadzikana kukuru.
Kugadziriswa kwakakosha kwakaburitswa kune ese mavhezheni eUbuntu; Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 19.04 uye 19.10 (uye Ubuntu 14.04 ESR), vashandisi vanogona kusimudzira nekumhanyisa kodhi sudo apt upgrade.
Asi chii chakanyanya kukuvadzwa pamusoro pazvo? Kana iwe wanga usiri kuziva nezvemambure iwe unofanirwa kuziva kuti mumwe munhu Ini ndinoburitsa kushomeka pane yepamutemo CVE saiti (Zvakajairika Njodzi uye Zviratidziro) muna Gumiguru 14 uye nhau dzakapararira nekukurumidza.
Iko kushandisa, kunotsanangurwa na TheHackerNews inotaura dambudziko mune Sudo package chengetedzo mutemo iyo inogona kubvumidza mushandisi yakaipa kana chirongwa kuita mirairo nemidzi mvumo pane sisitimu kunyangwe kana marongero eSudo akajekesa zvakajeka kuwana uku.
Kunyangwe kusagadzikana kwekuchengetedza kuchiratidzika senge kuri kure, kunyanya zvinogona kuitika pane chero muchina unomhanya neLinux, saka zvakakosha kuti uvandudze nekukurumidza sezvazvinogona.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti chengetedzo chigamba chinogadzirwa chete kugadzirisa iri dambudziko rakakomba uye hachiunze chero imwe shanduko, saka vese vashandisi vanokurudzirwa kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Ubuntu inoburitsa chigamba chikuru kugadzirisa dambudziko mu 'Sudo'
Ini ndashandisa rairo sudo apt kusimudzira uye hapana gadziriso inoonekwa. Ini ndangobva kuvandudza iyo system nemutemo mumwe chete. Ini handizive, pamwe chekuchengetedza chigamba chakatoiswa kare. Ndingaone sei kana icho chigamba chakaiswa?
Kune izvo zvakakosha, ini ndinoshandisa Xubuntu 18.04.3 LTS